AMSTERDAM: Maxaa ku soo kordhay khilaafkii u dhexeeyey guddiga maamula masjidka Quba .? - Somnieuws.com
AMSTERDAM: Maxaa ku soo kordhay khilaafkii u dhexeeyey guddiga maamula masjidka Quba .?
Khilaaf in muddo ah soo jiitamayay una dhexeeya guddi Soomaali ah oo maamula masjidul Quba, oo ah masjid Soomaalidu maamusho oo ku yaal Magaalada Amsterdam ayaa weli xal laga gaari la’ yahay.
Khilaafkani wuxuu bannaanka u soo baxay markii iimaamkii masjidka Shiikh Suldaan uu ka saaray KVK-ga C/risaaq oo guddiga ka tirsan, taas oo sababtay in xubno kale oo guddiga ka mid ah, kana caraysan tillaabada Shiikhu qaadayay in iyagana Shiikh Suldaan ka saaraan KVK-ga, waxaanna khilaafku lugaha la soo galay marxalad cusub, iyada oo maalin ba maalinta ka dambaysa la soo warinayay in xaaladu ka sii darayso.
Kaddib, maxaa dhacay.?
Muxuu yahay shirka Sebtida la iclaamiyay.?
Guddoomiyaha Jaaliyada Soomaalida Zwolle & nawaaxigeeda oo waraysi siiyay Somali Nederland tv
AMSTERDAM: Soomaalida Holland oo maanta dhageystay daraf ka mid ah darafyada isku khilaafsan maamulka masjidka Quba [SAWIRRO]